SP-G09 SOICARE 200ml seramiiki achara aromatherapy Mkpa Oil Diffuser, China SP-G09 SOICARE 200ml seramiiki achara Aromatherapy Mkpa Oil Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
Ebe nke Si Malite: Ningbo
SOICARE 200ml seramiiki achara Aromatherapy Mkpa Mmanụ Mgbawa
1.GREATLY INDR AIR Ogo: E wezụga ya ojiji na aromatherapy, a dị mkpa mmanụ diffuser na-arụ ọrụ dị ka a humidifier. Jiri ya iji mee ka ikuku na ikuku nke ụlọ gị ka mma, iji kpuchido ezinụlọ gị pụọ na ikuku akọrọ, microorganisms, allergens, dust, na ndị ọzọ!
2. Ogologo oge na-egbu oge: Onye na-ekesa ihe na-abịa na mmiri mmiri 200ml nke na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ísì ụtọ na-enweghị ọkụ na-emeghe na 2 MIST MODES: Ọnọdụ na-aga n'ihu na-enye 10 awa nke aromatherapy kpụ ọkụ n'ọnụ, Ọnọdụ oge ((30 sec ON, 30 sec OFF) ) na-enye na-adịgide adịgide maka awa 20 na sentụ dị nro.
Ọrụ 3.Quiet: Jiri teknụzụ ultrasonic, mmanụ a na-esi ísì ụtọ na-emepụta mmanụ na-aga n'ihu na-eme ka ikuku na-esi ísì ụtọ dị jụụ. Ọrụ ịsụ ude-ịgbachi nkịtị agaghị emetụta ogo ụra.
4.Safe & Nchekwa onwe: arosì ọkụ a na-esi ísì ụtọ maka mmanụ dị mkpa nwere ike ịdịru maka 5-10 awa. Nke a dị mkpa mmanụ diffuser ga-agbanyụ na-akpaghị aka mgbe mmiri gwụchara maka nchekwa gị na nchebe nke okpukpo diffuser nakwa.
mmepụta DC24V, 500mA
ihe onwunwe Achara achara + Wood + + PP
ìhè Yellow na-ekpo ọkụ
Olu oyuyo 15-20ml / h
Oge Ikpeazụ 5-10hours
Nhazi %135 * 110mm
unit ibu 580g
Ogo igbe agba 156 * 156 * 143mm
Oke kaadionye 33 * 49 * 31CM
SP-A07 800ml WIFI APP Control Azụmaahịa Ikuku Scsì Ọma Igwe
SP-USB09 asọmpi mmanụ enweghị mmiri